အိမ်လုပ်ကြက်သွန်ဟင်းချိုမှုရောစပ်မှု - သိကောင်းစရာများနှင့် Great Ideas!
တစ် ဦး လုပ်နိုင်တဲ့အတွက်ငရုတ်သီးခွေးငံပြာရည်
အိမ်လုပ် ကြက်သွန်ဟင်းချို လုပ်ရလွယ်ကူပြီးအလွန်စျေးသိပ်မကြီးလှပါ။ အကောင်းဆုံးအပိုင်းကိုသင်ကသို့ဝင်အတိအကျဘာကိုသိပါ! ဒီအိမ်လုပ်ကြက်သွန်ဟင်းချိုရောနှောခြင်းကိုပေါင်းထည့်ရတာကြိုက်တယ် အမဲသားစွပ်ပြုတ် ၎င်းကိုအသားကင်အဖြစ်သုံးခြင်းသို့မဟုတ်ပေါင်းထည့်ခြင်း အာလူးကြော် !
ဒီအိမ်လုပ်ကြက်သွန်ဟင်းချိုရောနှောခြင်းကိုသွားရန်အသင့်ရှိခြင်းကိုကျွန်ုပ်တို့နှစ်သက်သည်။ ငါ့ယောက္ခမက MSG ကိုဓာတ်မတည့်တဲ့အတွက်သူ့အတွက်ဖျော်ဖြေရတာလွယ်လွယ်လေးပါ။
ဒီအိမ်လုပ်ကြက်သွန်ဟင်းချိုရောနှောခြင်းသည်ကြက်သားခေါက်ဆွဲပြုတ်ကဲ့သို့သောဟင်းချိုများတွင်အလွန်ကောင်းသည်၊ သို့သော်၎င်းသည်သင်အရသာအချို့ကိုထည့်သွင်းလိုသောအရာအားလုံးအတွက်အလုပ်လုပ်သည်။ ကင်ကြက်သားရင်သား , ၄ ပါဝင်သောကြက်သားထမင်းကျစ်စရယ် , သင်ကအမည်ပါ!
အမဲသား bouillon granules
ကြက်သွန်နီကိုငါ့အိမ်လုပ်ကြက်သားရည်ထည့် ငရုတ်ကောင်းနှင့်အတူကထုမြေ၏သေချာစေရန်အရေးကြီးပါသည်။ အကယ်၍ ၎င်းတွင်ကြီးမားသော granules များရှိပါက၎င်းသည်ရာသီအလိုက်ကောင်းသောရောနှောခြင်းမျိုးမဟုတ်ပါ။
အိမ်လုပ် Cajun ရာသီ
အိမ်လုပ် Taco Seasoning Recipe
အိမ်လုပ်ကြက်သွန်ဟင်းချိုအရောအနှောသည်သင်၏ဗီရိုထဲတွင် ၆ လအထိကြာရှည်ခံလိမ့်မည်။ အိုး၏အောက်ခြေတွင်သူတို့သက်တမ်းကုန်ဆုံးမည့်နေ့ကိုရေးသည်။ ထို့ကြောင့်မည်မျှကြာသည်ကိုသူတို့သိသည်။ (သင်သို့မဟုတ်ပြီးပါကရေသို့မဟုတ်လက်သန့်ရှင်းဆေးသည်ဖန်သားကိုဖန်သားမှဖယ်ရှားလိမ့်မည်) ။
ဒီအိမ်လုပ်ကြက်သွန်ဟင်းချိုမှုန့်ကို Lipton Onion Soup ရောစပ်ထားတဲ့စာအိတ်ကိုချက်ပြုတ်နည်းတွေနဲ့အစားထိုးနိုင်ပါတယ်။ ဒါဟာအဘို့ကောင်းပါတယ် အမေ့အိမ် ကြက်သားနှင့်ပြင်သစ်ကြက်သွန်နီနှိုက် ထိုအရိုးရှင်းသောကြက်သွန်ဟင်းချိုလုပ်!
ပြင်ဆင်ချိန်နှစ် မိနစ်များ ချက်ပြုတ်ချိန်0 မိနစ်များ စုစုပေါင်းအချိန်နှစ် မိနစ်များ ဝန်ဆောင်မှု၁၀ စာရေးသူHolly Nilssonအိမ်လုပ်ကြက်သွန်ဟင်းချိုမှုန့်သည်လုပ်ရန်လွယ်ကူပြီးစျေးသိပ်မကြီးသည့်အပြင်အရသာလည်းကောင်းသည်။ အကောင်းဆုံးအပိုင်းကိုသင်ကသို့ဝင်အတိအကျဘာကိုသိပါ! ပုံနှိပ်ပါ ပင်
▢⅓ ခွက် ကြက်သွန်အလွှာ
▢၇ ဇွန်း အမဲသား bullion granules
▢¼ လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ကြက်သွန်ဖြူအမှုန့်
▢½ လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ငရုတ်ကောင်း
ဗီရိုထဲမှာ ၆ လအထိသိမ်းထားပါ။
ဇွန်း ၅ ခု = ဟင်းချိုရောစပ်မှု ၁ အထုပ်
5 ဇွန်း = ဟင်းချိုရောနှော 1 packet ကို
သော့ချက်စာလုံးအိမ်လုပ်ကြက်သွန်ဟင်းချိုရောနှောခြင်း သင်တန်းရာသီ ချက်ပြုတ်ခဲ့သည်အမေရိကန်© SpendWithPennies.com ပါဝင်သည့်အကြောင်းအရာများနှင့်ဓာတ်ပုံများသည်မူပိုင်ခွင့်နှင့်ကာကွယ်ထားသည်။ ဤစာရွက်ကိုမျှဝေခြင်းကိုအားပေးပြီးတန်ဖိုးထားသည်။ မည်သည့်ဆိုရှယ်မီဒီယာကိုမဆိုကော်ပီကူးယူခြင်းနှင့် / သို့မဟုတ်ကူးယူခြင်းများကိုလုံးဝပိတ်ပင်ထားသည်။ ကျွန်ုပ်၏ဓာတ်ပုံအသုံးပြုမှုမူဝါဒကိုဒီမှာကြည့်ပါ ။